ခေါင်းစီးသတင်းမော်ကွန်း - ထို rayhab
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) arasında “Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü” kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlenen imza töreninde yaptığı [ပို ... ]
Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’ne evsel atık suları taşıyan kolektör hattının Mürselpaşa Bulvarı’ndan geçen kısmında temizlik çalışması yapılacağından Yeşildere Caddesi’nin Basmane yönüne çıkış bölümü 23 Eylül tarihinden itibaren trafiğe kapatılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel [ပို ... ]
Bilecik (YHT) ရထားအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းနှစ်ခုယာဉ်မောင်းသူ၏အသက်တာကိုဆုံးရှုံးခဲ့သူကို manual ထိန်းချုပ်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်လွဲချော်ရပ်တန့်။ သို့သော်ထို့နောက်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံ, Bilecik Ahmetpınar၏ရှိရာရွာဒေသဘူမိဗေဒအင်ဂျင်နီယာများ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (JMO) အနိုင်ရ [ပို ... ]
Havaist တောင်တက်နာရီ Havaist စခန်းများနှင့် Havaist စျေးအချိန်ဇယားများ။ 15 ။ အစ္စတန်ဘူလ်၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီများHAVAİST Inc ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏လုပ်ငန်းခွဲခြင်း, အချို့သောအချက်များစေရန်လေဆိပ်-လွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ညှနျကွားထဲမှာအစ္စတန်ဘူလ်မြို့အတွင်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အလယ်ဗဟိုကနေ 19 [ပို ... ]
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, 1 နှစ်ပေါင်းန်းကျင် built ရပ်, ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ "Ümraniye-Flat-Goztepe မီထရိုလိုင်း" ပြန်လည်စတင်ခံရဖို့များကြောင့်တစ်ဦးအခမ်းအနားတွင်မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ "ဒီတိုင်းပြည်မှာတော့နှင့်ဤမွို့၌ကိုဖန်ဆင်းမဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တဦးတည်းတစ်ခုတည်းကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ရမည်ဘယ်တော့မှမည်, ဖွစျလိမျ့မညျ" [ပို ... ]
Bilecik အတွက်မီးရထားမတော်တဆဝမ်းနည်းဖွယ်အခမ်းအနားမှအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားစက်လုပ်သမားကွယ်လွန်။ သူတို့ရထား Recep Tunaboylu (37) နှင့်များ၏မျိုးချစ် Sadat (39) အသုဘပဌနာကွယ်လွန်သွားသူကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမြို့ရိုးအစက်လုပ်သမားသို့ဆောလမ်းညွှန်ရထားလမ်းထဲကလာထိန်းချုပ်မှုမှ Bilecik အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကို [ပို ... ]
Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သစ်မှာအမြင့်မြန်နှုန်းရထားများ၏ဆောက်လုပ်ရေးပြီးစီးခဲ့ခြင်းအားဖြင့် (YHT) ဘူတာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအသွားအလာမှဖွင့်လှစ်။ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Ugur အီဘရာဟင် Altai အသစ် YHT ဘူတာ4သူတို့ချက်ချင်းဧပြီလ mazbata ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သောအခမ်းအနားအပြီးတိုက်မြစ်ကိုချ [ပို ... ]
မိမိအရေးထားလျက်ရှိ၏ကြေညာချက်တွင် AK ပါတီလက်ထောက် Fatma Aksalu Edirne, Halkalı Kapıkuleမီးရထားလိုင်းစီမံကိန်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဥရောပသမဂ္ဂဝန်ကြီးဌာန - တူရကီ IPA: II ကို Term ဘဏ္ဍာရေးကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအာရုံစိုက်မှုများ၏မူဘောင်အတွင်းသဘောပေါက်လိမ့်မည်ဟုအကြီးဆုံးအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်း [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့အနှံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ခဲ့ဦးမည်အသက်ရှူနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါကဏ္ဍတွင်တဲ့ Metropolitan အဖွဲ့များAkçarayဓါတ်ရထားလိုင်းအလုပ်လုပ်ဆက်လက်အနိုင်ရရှိKuruçeşme၏နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုတိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်။ သိပ္ပံရေးရာအဖွဲ့များလမ်းရထားအကျင့်ကိုကျင့် [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) အထွေထွေMüdürülüğüလီ Ihsan သင့်လျော်သော, TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က အဝေးပြေး၏ဆိုပါကအထွေထွေညွှန်ကြားမှုအလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယသမ္မတခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ တာဝန်ကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေယနေ့အင်အားစုသို့ကြွတော်မူသောတရားဝင်ပြန်တမ်းအရေအတွက်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါတရားဝင်ပြန်တမ်း၏ယနေ့ပြဿနာအတွက် [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံဘုတ်အဖွဲ့ (TCDD) အထွေထွေဒါရိုက်တာနှင့်ဥက္ကဌ İsa Apaydın တာဝန်မှရယူရန်။ သူ၏အကိုအစားထိုးလက်ထောက်အလီ Ihsan သင့်လျော်သောအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန်, တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏လက်မှတ်နှင့်အတူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာဝန်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်များအရ [ပို ... ]
Touax မှ General Manager ဂျရုမ်းက Le Gavrian အဆိုပါ5စက်တင်ဘာလယနေ့TÜDEMSAŞTÜDEMSAŞ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ်ထမ်းများ၏ Touax ကုမ္ပဏီသွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက် - ထိုစီစဉ်ထား 90 ခွကေို Sgmmrs type ကိုလှည်းများအတွက်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်ထုတ်လုပ်ရမည်, TÜDEMSAŞအတု၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲ့ "စမတ်စီးတီးအစ္စတန်ဘူလ်" နည်းပညာဆိုင်ရာ applications များအကောင်အထည်ဖေါ်သောရူပါရုံကိုအောက်တွင်အစ္စတန်ဘူလ် TEKNOFEST- လေကြောင်းနှင့်နည်းပညာများမျှတသောနေရာယူခဲ့ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), အစ္စတန်ဘူလ်2အများအပြားတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး "စမတ်စီးတီး" နည်းပညာ။ ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့တံခါးများဖွင့်လှစ် [ပို ... ]
WRI ပထမဦးဆုံးနည်းဗျူဟာစက်တင်ဘာလအတွက်ဆက်သွယ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးတည်ခင်းဧည်ခဲ့သည် 18-19, တူရကီရဲ့ဥရောပသမဂ္ဂရေရှည်တည်တံ့သောမြို့ကြီးများကိုရှေးခယျြစီမံကိန်းများအပေါ် Izmir ၏မှုတွင်မွို့ "တူရကီစက်ဘီးလာကြ" ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ပညာရေးစက်ဘီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Izmir မြှင့်တင်ရန်ဆက်သွယ်ရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတိုးတက်လာဖို့လုပ် [ပို ... ]
12... 1.754 »